'सिक्किम फर्किँदा बुवा-आमालाई नेपालबाट उपहार लगिदिने हैसियत बनाउनु छ' (भिडिओ) :: विवेक राई :: Setopati
'सिक्किम फर्किँदा बुवा-आमालाई नेपालबाट उपहार लगिदिने हैसियत बनाउनु छ' (भिडिओ)
अहिले नै सिक्किम फर्किन मन छैन कमेडियन विक्कीलाई
'कमेडी च्याम्पियन सिजन २' को फाइनल सकिएको एक साता बितिसक्दा पनि दोस्रो बनेका विक्की अग्रवाल आफ्नो जन्मघर भारतको सिक्किम फर्किन भ्याएका छैनन्। अहिले उनी नेपालमै बस्ने सोचले काठमाडौंमा डेरा खोजिरहेका छन्।
कुराकानीको सिलसिला त्यहीँबाट सुरू गर्दा विक्कीले ठट्टा गर्दै भने, 'फाइनलपछि म सिक्किम फर्केको छैन। हारेको मुख लिएर कसरी फर्किनु?'
कमेडियनहरूका लागि यस्ता ठट्टा सामान्य हुन्। तर जीवनमा एकचोटी पनि नेपालमा पाइला नटेकेका विक्कीका लागि यहाँकै रियालिटी सोमा आएर यो सफलता हात लाग्नु सामान्य होइन। विक्की भन्छन्, 'यतिधेरै माया पाउँछु भनेर सोचेको पनि थिइनँ। यही मायालाई सम्झेर गरिरहेकै काममा अगाडि जाने सोचेको छु। हेरौं कहाँसम्म पुगिन्छ!'
कमेडी च्याम्पियनमा आउनुअघि विक्की सिक्किममै 'स्ट्यान्डअप' कमेडी गर्थे। त्यतिञ्जेल उनलाई कमेडी च्याम्पियनको बारेमा धेरै कुरा थाहा थिएन। त्यहीबेला सिजन १ का प्रतिस्पर्धी अनिल राईले विक्कीलाई सिजन २ का लागि अडिसन दिन सुझाए। अनिल र विक्की फेसबुकमा पहिल्यैदेखि साथी थिए। साथीको आग्रहपछि विक्कीले आफूले सिक्किममै गरेको 'सो' को एउटा भिडिओ पठाए। नभन्दै उनी डिजिटल अडिसनमा छनोट भए।
'मैले त बिर्सिसकेको थिएँ तर काठमाडौं आउनुपर्‍यो भनेर फोन आयो। त्यहाँदेखि मैले कमेडी च्यापियन खोजेर हेर्न थाले। हेर्दा राम्रो/राम्रो कमेडियनहरू पनि गएको रैछ भन्ने भयो। त्यसपछि आफू पनि जानुपर्छ भनेर काठमाडौं आएँ,' विक्कीले भने।
च्याम्पियनको अगाडि यात्राको लागि विक्की काठमाडौं आउनु पर्ने त भयो तर त्यो कुरा परिवारलाई सुरूमै भन्न उनलाई धक लाग्यो। किनभने च्याम्पियन कस्तो खालको रियालिटी सो हो भनेर उनी आफू पहिले जान्न चाहन्थे। त्यसैले परिवारलाई कार्यक्रमका लागि दुई दिन नेपाल जानुछ भनेर उनी काठमाडौं हुइँकिए।
पहिलो पटक नेपाल आउँदै गरेका विक्कीलाई एउटै कुराको डर थियो: त्यो हो नेपाली दर्शकले उनको कमेडीलाई रुचाइदिन्छन् वा दिन्नन्?
विक्कीले भने, 'कमेडी आफूले नै गरिरहेको काम भएकाले नर्भस त थिइनँ तर नेपालको मान्छेले कस्तो कमेडी रुचाउँछन् भन्ने थाहा थिएन। किनभने हाम्रो भाषादेखि केही कुराहरू फरक हुन्छ। त्यसलाई भन्ने शैली फरक हुन्छ। तर जब फिजिकल अडिसनमा 'गोल्डेन की' पाएँ त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ पनि यस्तो कमेडी रुचाउँदो रैछ भनेर आँट आयो।'
फिजिकल अडिसनमा पाएको गोल्डेन कीले विक्कीलाई आफू च्याम्पियनका लागि नेपाल आएको कुरा परिवारलाई भन्ने आँट पनि दियो।
'मैले परिवारलाई टप २४ मा पुगेपछि मात्र भनें। फिजिकल अडिसनमा आउँदा भनेको थिइनँ। सुरूमा यो कस्तो सो हो भनेर बुझ्नुथियो। पछि गोल्डेन की पाएर सिक्किम फर्किएपछि मात्र परिवारलाई भनें,' उनी सम्झिन्छन्।
गोल्डेन की परिवारलाई हात लगाएपछि विक्की च्याम्पियनको अगाडि यात्राको लागि फेरि काठमाडौं आए। आफूले दिने प्रस्तुतिको तयारी गर्न थाले। विक्की च्याम्पियनका एकाध प्रतिस्पर्धीमा पर्छन् जसले जजहरूमाझ सुरूदेखि नै प्रभाव जमाउन सके। दर्शकको मन जित्न सफल भए। उनले छोटो समयमै धेरै नेपाली फ्यान कमाए। विशेष गरी उनलाई पछ्याउनेमा तन्नेरी पुस्ता छ।
अहिले त यस्तो भइदियो कि विक्कीलाई कमेडी च्याम्पियनसँग जोडेर सिक्किमभन्दा नेपालमा बढी मान्छेले चिन्न थालेका छन्।
'च्याम्पियनलाई लिएर मलाई नेपालमा जति मान्छेले चिन्नुहुन्छ सिक्किममा पनि त्यति मान्छेले चिन्नुहुन्न। तर जतिले चिन्नुहुन्छ उहाँहरूले एकदम माया गर्नुहुन्छ,' विक्की भन्छन्, 'अस्ति फाइनल अगाडि जाँदा पनि सबैले न्यानो स्वागत गर्नुभयो।'
त्यही मायाका कारण उनलाई कमेडी च्याम्पियनको उपाधि सिक्किमेली जनतालाई उपहार लैजान मन थियो। तर त्यो पूरा हुन सकेन। फाइनलमा एक कदम पछि परे पनि विक्कीलाई विजेता मान्ने दर्शकको कमी थिएन। नेपाली दर्शकहरूको यति धेरै माया पाउँछु भनेर नसोचेको भन्दै यही मायाका कारण अब नेपालमै केही गरेर बस्ने सोच बनाएको विक्की बताउँछन्।
'अब नेपालमै बस्ने हो। दसैंमा सिक्किम गएर फर्किहाल्छु। तर बसाइ हुन्छ वा हुँदैन भन्नेचाहिँ कोठा भाडा तिर्ने पैसा कमाइयो भने बसिन्छ नत्र सिक्किम फर्किइन्छ,' उनले भने।
कमेडी च्याम्पियनले एक तहको चर्चा दिएपनि वास्तविक संघर्ष भने अब सुरु हुने विक्की बताउँछन्। यसअघि सिक्किमलाई आफ्नो कर्मथलो बनाइरहेका उनलाई अब भने नेपालमै केही गर्ने इच्छा छ। उनका लागि नेपाली बजारमा स्थापित गर्न त्यति सजिलो छैन। किनभने अहिले विक्की यो सहरमा एक्लो छन्। पहिलो पटक नेपाल टेकेका उनलाई काठमाडौंका गल्लीहरू अझैं मज्जाले थाहा छैन। यहाँका धेरै कुराहरूसँग उनी परिचित हुन बाँकी छ।
विक्कीले जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्ने प्रण लिएका छन्। उनी जसरी पनि आफूलाई काठमाडौंमा स्थापित गर्न चाहन्छन्।
'संघर्ष गर्नु भनेरै आएको हो र संघर्ष गर्नु म ल्याङ मान्दिनँ। तर मेरो आगामी दिनचर्या चल्छ वा चल्दैन भन्ने कुरा मैले काठमाडौंलाई के दिनसक्छु र काठमाडौंले मलाई के दिनसक्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ,' उनले भने।
कमेडी च्याम्पियनपछि अहिले विक्कीको दैनिकी नै यस्तै कुरा सोचेर बितिराछ। उनी नेपालमा आफूले पाएको मायालाई भरपुर सदुपयोग गर्न चाहन्छन्। त्यही भएर पनि जतिसक्दो चाँडो केही नयाँ कुरा दर्शकमाझ पस्किने सोचमा विक्की छन्।
'संघर्षकै कुरा गर्दा यदि मलाई खान लाउन पुगेन भने पनि म कोशिस गर्नेछु। मैले घरमा पनि यहीँ कुरा भनेको छु,' उनले भने।
नेपालमै बस्ने सोच बनाए पनि मन त विक्कीको सिक्किममै छ। यति हो उनलाई हरेक पटक सिक्किम फर्किँदा नेपालबाट केही उपहार लैजान सकुम् भन्ने छ।
'मलाई कस्तो भएर सिक्किम फर्किनु मन छ भने जतिखेर म घर जान्छु मेरो बुवाआमालाई केही लगिदिन पाउँ। कहिले पनि फोन गरेर उहाँहरूलाई पैसा माग्नुपर्ने स्थिति नआओस्। त्यति हैसियत भयो भने म आफूलाई सफल भएको ठान्छु,' उनले भने।
अबका दिनमा विक्की सिक्किम र नेपाललाई आफ्नो कमेडीमार्फत जोड्ने सोचमा छन्। उनका लागि सिक्किम र नेपाली दर्शकको माया दुबै प्रिय छन्। आफूलाई नेपालले मोहनी नै लगाएको भन्दै विक्कले हाँस्दै भने, 'मलाई नै लागेको थिएन तर नेपालले मान्छेलाई प्रकेपछि जानै दिँदैन रैछ। साँच्ची नै यतिधेरै माया पाएँ कि त्यही कारणले मलाई सिक्किम जानै मन छैन।'
आफूलाई नेपालमै स्थापित गर्ने सोच बनाएका विक्की अहिले दर्शकमाझ के नयाँ प्रस्तुति लिएर आउने भनेर तयारी गर्दैछन्। त्यसैको लागि विभिन्न मान्छेहरू भेटिरहेका छन्। दिमागमा नयाँनयाँ कार्यक्रमको खाका कोरेर बसिरहेका छन्। तर जस्तोसुकै कार्यक्रम लिएर आए पनि स्ट्यान्ड अप भने आफूले नछोड्ने उल्लेख गर्दै विक्की भन्छन्, 'स्ट्यान्डअफ छोड्ने कुरा आएन। किनभने यसले नै मलाई पहिचान दिएको हो। अब केही नयाँ गर्ने सोच बनाइरहेको छु। जुन अहिलेसम्म नभएको होस्। तर त्यो सोचलाई दर्शकमाझ पुर्‍याउन एउटा पुलको खाँचो छ र अहिले म त्यहीँ पुलको खोजीमा भौतारिरहेको छु।'
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १४, २०७८, ००:४१:००
'राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणको लागि फोन आउँदा विश्वास नै लागेन, पक्का गर्न म्यानेजरलाई सोधें' (भिडिओ)